Bit By Bit - Ukuvuma
Le ncwadi ine isahluko sonke ngokubambisana mass, kodwa le ncwadi ngokwayo a ukusebenzisana mass. Impela wamane le ncwadi kwakungeke zikhona ukube bekungengenxa ukwesekwa ophanayo abantu abaningi emangalisayo kanye nezinhlangano. Ngenxa yaleso, Ngiyambonga kakhulu.
Abantu abaningi onikele ngempendulo mayelana eyodwa noma ngaphezulu zonke lezi zahluko noma enwetshiwe izingxoxo nami mayelana nale ncwadi. Ngiyambonga Solon Baracas, uTom Boellstorff, Clark Bernier, Michael Bernstein, Megan Blanchard, Josh Blumenstock, Dalton Conley, Yo-Yo Chen, uthi u-Ethan Fast, Nick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Sharad Goel, uJake Hoffman, Joanna Huey , Patrick Ishizuka, Ben Jones, Dawn Koffman, Sasha Killewald, Harrissa Lamothe, Andrés Lajous, uDavide Lee, Amy Lerman, Meagan Levinson, Andrew Ledford, Dai Li, uKaren Levy, Ian Lundberg, Xiao Ma, Andrew Mao, uJohane uLevi Martin, Judie Miller, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil, uNicole Pangborn, Ryan Parsons, Devah Isicingo, Arnout van de Rijt, uDavide Rothschild, uBill Salganik, uLaura Salganik, umKristu Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Brandon Stewart, Michael Szell, Sean Taylor, Florencia Torche, Rajan Vaish, Taylor Winfield, Han Zhang, futhi Simone Zhang. Ngizothanda futhi ukubonga abafundi Sociology 503 in the Spring 2016 sokufunda yisihumusho zakuqala lombhalo wesandla, futhi abafundi izifundo bami eminyakeni abaye basiza shape ngandise imiqondo kule ncwadi.
Kwadingeka an amazing incwadi mbhalo wesandla workshop ukuthi wahlelwa thwe ngokubambisana Center Princeton analo the Study of Democratic Ezombusazwe. Ngithanda ukubonga Marcus Ngaphambi futhi Michele Epstein ngokweseka inkomfa. Futhi, ngingathanda ukubonga bonke abawugijimayo abazinika isikhathi ekuphileni kwabo kumatasa ukungisiza ngithuthukise le ncwadi: Elizabeth Bruch, uPawulu DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, uKaren Levy, Mor uNahamani, Sean Taylor, UMarkus Prior, Jess Metcalf, Brandon Stewart, Duncan Watts, futhi Han Zhang. It ngempela kwaba usuku elimangalisayo, futhi ngithemba ukuthi ngiye ngakwazi ukusebenza kuqondiswe ezinye ukuhlakanipha ukuthi igumbi umbhalo wesandla sokugcina.
Abambalwa abanye abantu bafanelwe ngiyabonga ekhethekile. Duncan Watts kwaba ocwaningeni lami Umeluleki, futhi kwaba nocwaningo yami ocwaningeni kwangenza ngaqaphela ukuthi okuthakazelisayo lolu hlobo locwaningo kungaba; ngaphandle into enganginayo esikoleni graduate kule ncwadi wayengeke zikhona. UPawulu DiMaggio waba umuntu wokuqala ngqá ukungikhuthaza ukuba abhale le ncwadi. Kwenzeka ngelinye ntambama ngesikhathi sobabili elinde umshini ikhofi Wallace Hall, futhi Ngisayikhumbula kuze kube yileso sikhathi, umqondo we ubhala incwadi wayengakaze wacabanga yami. Ngesinye isikhathi mina empeleni ngokubhala le ncwadi ngaqalekisa uPawulu ukusikisela kwakhe, kodwa manje Ngimbonga ngokusuka enhliziyweni kuye ngenxa obukholisayo kimi ukuthi ngangenza eqinisweni kukhona lokutsite labafuna kukusho nokuthi abantu babeyoba nesithakazelo. Ngizobe futhi uthanda ukubonga Karen Levy sokufunda cishe nakuwo wonke amazwe izahluko amafomu yakudzala futhi messiest; wangisiza ubone isithombe esikhulu lapho ngase washaya ukhula. I ungathanda ukubonga Arvind Narayanan ngokungisiza ukugxila futhi zizilungise kanjani izimpikiswano encwadini phezu zikuyise eziningi ezinhle. Brandon Stewart kwaba njalo happy ukuxoxa noma bheka isahluko, kanye nokuqonda kwakhe nesikhuthazo wangigcina ezihamba phambili, ngisho nalapho ngihlanza wayeqala ukuzulazula emaceleni. Futhi, ekugcineni, Ngithanda ukubonga Marissa iNkosi ngokungisiza beveza isihloko sale ncwadi ntambama eyodwa libalele New Haven.
Ngenkathi ubhala le ncwadi, ngazuza ukusekelwa izikhungo ezintathu amazing. Okokuqala, at Princeton University, Ngiyambonga kwengisebenza abafundi noMnyango kwabantu for nokugcina isiko efudumele futhi basekelane. Ngizothanda futhi ukubonga Center for Technology Information Inqubomgomo nihlola me a yengqondo ebhaliwe ikhaya emangalisayo lesibili lapho ngangingakwazi ukufunda okwengeziwe mayelana nendlela ososayensi computer ukubona iphasi. Izingxenye ezingaphambili zale ncwadi lapho lalotshwa ngesikhathi ngineminyaka on sesabatha esasinikezwe wasePrinceton. Okokuqala, ngithanda ukubonga Microsoft Research, New York City ngokuba ekhaya 2013-14. Jennifer Chayes, uDavide Pennock, futhi lonke yezamakhompyutha iqembu isayensi emphakathini Sebawoti emangalisayo kanye nozakwabo. Okwesibili, ngingathanda ukubonga Cornell Tech ngokuba ekhaya 2015-16. Dan Huttenlocher, Mor uNahamani, futhi wonke umuntu kule Social Technologies Lab wasiza ukwenza Cornell Tech imvelo ekahle yona ukuba ngiyifeze le ncwadi. Ngezindlela eziningi zale ncwadi imayelana ngokuhlanganisa imibono evela idatha isayensi nesayensi yezenhlalo, futhi ngicabanga ukuthi kokubili Microsoft Ucwaningo Cornell Tech lezi zimo zezulu zokuzenzela yalolu hlobo nabanengqondo uMhloli Wemiqulu.
Ngenkathi ubhala le ncwadi, kwadingeka omuhle ucwaningo usizo kubantu abathathu. Ngiyambonga Han Zhang, ikakhulukazi usizo lwakhe ekwenzeni emagrafu kule ncwadi. Ngiyambonga Yo-Yo Chen, ikakhulukazi usizo kuye kwenta tinhlaka imisebenzi kule ncwadi. Ekugcineni, Ngiyambonga Judie Miller, ikakhulukazi usizo kuye amaphutha ethungatha phansi yonke uhlobo izinto emtatsheni wezincwadi.
Ngathola impendulo eziwusizo emibonweni kule ncwadi nganoma eziningana izinkulumo. Ngithanda ukubonga abagqugquzeli kanye abahlanganyeli izenzakalo ezilandelayo: Cornell Tech zezinzwa Media Wokucwaninga, Princeton Center for the Study of Democratic Ezombusazwe Wokucwaninga, Stanford HCI Colloquilum, eBerkeley Sociology Colloquilum, uRussell Sage Foundation Working Group on yezamakhompyutha Social Science, Princeton DeCamp Bioethics Wokucwaninga, Columbia quantitative Izindlela Social Sciences Nomlayezo Wokufundisa Ngokuvakasha Somlomo Series, Princeton Center for Information Technology yemfihlo Technology and Society Kufundza ngemacembu, Simons Institute for the Theory ka Computing Workshop on Iziqondiso New e yezamakhompyutha Social Science & Data Science, Data and Society Workshop, University of Chicago, Sociology Colloquilum, International Conference on yezamakhompyutha Social Science, Data Science Summer School at Microsoft Research, futhi Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam) Umhlangano Waminyaka Yonke Ngo.
Le nguqulo web yale ncwadi wadalwa uLuka Baker, uPawulu Yuen, futhi Alan Ritari we Agathon Group. Ukusebenza nabo ngale phrojekthi kwaba injabulo, njengoba njalo. Enye yezinto engizithandayo amaphrojekthi ethu ndawonye ukuthi mina izoqhubeka nokucosha okuhle ku collaborations yethu. Ngingathanda ikakhulukazi uthanda ukubonga uLuka futhi asathuthuka inqubo build for sale ncwadi futhi engisiza indlela emagumbini emnyama Git, pandoc, futhi wenze.
Le ncwadi kanye website elihambisana nalesahluko badalwa eziningi ovulekile amaphrojekthi. Ngithanda ukubonga abanikelayo ukuthi lemisebenzi elandelayo: Git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-esethulweni, Hypothesis, eyeqisayo, sokuqalisa, Nokogiri, GNU Yenza, abangondingasithebeni, Ansible, LaTeX, futhi Zotero. Konke amagrafu kule ncwadi badalwa R (Team 2016) , futhi wasebenzisa amaphakheji elandelayo: ggplot2 (Wickham 2009) , dplyr (Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Wickham 2015) , imoto (Fox and Weisberg 2011) , cowplot (Wilke 2016) , png (Urbanek 2013) , igridi (Team 2016) , ggrepel (Slowikowski 2016) , kanye emojifont (Yu 2016) . Ngithanda ukubonga Kieran Healy for post yakhe blog ukuthi safike me waqala nge pandoc. Futhi, ngingathanda ukubonga Arnout van de Rijt futhi uDavide Rothschild ngokusipha idatha esetshenziswa lokuphinda ezinye emagrafu kusuka amaphepha abo, futhi ngingathanda ukubonga Josh Blumenstock ngokwenza amafayela iThrojani efaka isimeli zomphakathi iphepha lakhe.
At Princeton University Press, Ngithanda ukubonga Eric Schwartz ababekholwa kule phrojekthi ekuqaleni, futhi Meagan Levinson ababesiza okulenza lifike. Meagan kwaba umhleli best ukuthi umlobi wayengabhala noma babe; Ngazizwa sengathi njalo kwakungekho ukuze basekele le phrojekthi, ezikhathini ezinhle ezikhathini ezimbi. Futhi, manje uma ngizithola anike abanye, ngenza konke engingakwenza ukuze kuqondiswe isitayela Meagan sika eyakhayo ngokucophelela.
Ekugcineni, ngithanda ukubonga abangani nomndeni wami. Wena baye bangisekela saloluhlelo ngezindlela eziningi kangaka, ngokuvamile ngezindlela abaphefumulelwe babengayazi. Ngingathanda ikakhulukazi uthanda ukubonga abazali bami, uLaura futhi uBill, futhi abazali-in-law wami, uJim uCheryl, ngokusekela kwabo never-ophela ngenkathi le phrojekthi waqhubeka nokunye. Ngithanda ukubonga izingane zami. Eli futhi Theo, uke wangibuza izikhathi eziningi kangaka lapho encwadini yami ekugcineni sengiqedile. Well, impendulo manje. Futhi, okubaluleke kakhulu, ngifuna ukubonga umkami u-Amanda. Ngiyazi ukuthi le phrojekthi kwenza kwadingeka nezikhathi ezinzima nezimnandi, futhi ngiyakuba yilokhu nginikhumbuza njalo jabula uthando lwakho never-kuxege kanye nokwesekwa.